वृद्धभत्ता जम्मा गरेर धर्मशाला निर्माणमा गर्ने ८५ वर्षीय हजुर बुवालाई सम्मान स्वरूप शेयर गरौ ! - Gorkhali Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/वृद्धभत्ता जम्मा गरेर धर्मशाला निर्माणमा गर्ने ८५ वर्षीय हजुर बुवालाई सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !
सरकारले दिएको वृद्धभत्ता कुन काममा खर्च हुन्छ ? आफ्नो उपचारमा, घरायसी वा व्यक्तिगत काममा। तर मुगुमा एक व्यक्तिले वृद्धभत्ता जम्मा गरेर गाउँमा धर्मशाला बनाउन थालेका छन्।
सरकारले सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक उपलब्ध गराउँदै आएको रकम जम्मा गरेर मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–९ पापुगाउँका ८५ वर्षीय जयखर ऐडी धर्मशाला निर्माणमा जुटेका हुन्। वृद्धभत्ताबापत उनले मासिक दुई हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन्। ऐडीले रकम जम्मा गरेर सार्वजनिक जग्गामा धर्मशाला बनाउन थालेको बताए।
धर्मशाला बनाउन उनले ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्।धर्मशालाका लागि दुई बन्डल जस्तापाता, काठ र ढुंगा जम्मा गरिसकेको ऐडीले बताए। लगातारको वर्षात्का कारण निर्माण भने सुरु हुन सकेको छैन। उनी वर्षात् रोकिएलगत्तै धर्मशाला बनाएर हस्तान्तरण गर्ने हतारमा छन्।
आफ्ना छोरा नभएका कारण उनी छोरी र ज्वाइँसँग बस्दै आएका छन्।वृद्धभत्ता जोगाएर जयखर अगाडि सरेपछि बाँकी निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने वचन गाउँलेले दिएका छन्। तर जयखरले कसैको सहयोग नलिने बरु रकम अभाव भएमा आउने भत्ताबाट तिर्ने बताए।मुगुम कार्मारोङ गाँउपालिका–९ का वडाध्यक्ष बिर्खबहादुर बुढाले धर्मशाला निर्माणमा वडाले पनि सहयोग गर्ने बताए।
गाउँलेको मृत्युमा पनि कर्मकाण्ड गर्दा समस्या भएको देखेपछि आफूले धर्मशाला बनाउने योजना बनाएको जयखरले सुनाए।
गरेकाे काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन !
पुर्व मन्त्रीका छोरा पशुपतिको खोलामा तपस्या गर्दै, अघोरी बाबा बारे मुख खोले
खुशीको खबर : प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको सपना साँच्चिकै बिपनामा परिणत हुँदै, छ महिना भित्र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सररर
वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा यस्ता चिजहरु राख्नु शुभ र लक्ष्मीको बास हुन्छ